Ungasongeza njani isiphumo se-bokeh kwifoto kwi-Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ungasongeza njani isiphumo se-bokeh kumfanekiso kwi-Photoshop
Iziphumo zebokeh Kuye kwaba kule minyaka apho abanye abavelisi beefowuni beqhayisa xa bebonisa iindaba zabo kwintengiso yefowuni ephathekayo. Zininzi iiapps kunye neefowuni ezifanayo ezibandakanya esi siphumo ngokomgangatho ukuze sabelane ngeefoto zethu kuthungelwano lwentlalo kunye nenethiwekhi.
Nangona sihlala sineAdobe Photoshop yethu ukuze sikwazi ukucacisa kunye Yenza isiphumo se-bokeh ngokugqiba okungcono kunokuba ezinye ii -apps zibonisa. Kungenxa yoko le nto siza kukufundisa indlela yokongeza isiphumo se-bokeh kumfanekiso kule nkqubo inkulu kangaka, kanye njengoko senzile ngesi sifundo, kwaye ikwazile ukutshintsha ukubonwa koyilo, umzekeliso kunye nokuphinda kulungiswe kwakhona kule minyaka ilishumi idlulileyo.
Ungasongeza njani isiphumo se-bokeh kumfanekiso
Kuqala siya yabelana ngomfanekiso onokuwukhuphela kunye nokusebenzisa ukulandela isifundo kwaye ke fiddle ngamanye amaxabiso:
Into yokuqala kukukhetha isixhobo sokukhetha esikhawulezayo ngeqhosha le-W.
Siphinda-cofa kwimvelaphi yomfanekiso ngelixa ubambe iqhosha lokushiya.
Ukuba sidlula kukhetho, xa silungelelanisa ngakumbi inani lesibini, esinokusebenzisa alt kunye nokucofa imouse ukucima icandelo elithile.
Nje ukuba imvelaphi ikhethwe, siguqula ukhetho ngokulawula + oonobumba abakhulu + mna.
Ngoku sicinezela iqhosha le-W kwakhona, kwaye ucinezela kwiqhosha eliphezulu «Khetha kwaye usebenzise ...».
Kwiwindow ephumayo sisebenzisa i-4px radius.
Ukuqhubeka ezantsi efestileni, sandisa "useto lokuPhuma" kwaye kuThumela ku, sikhetha "Umaleko omtsha ngemaski yokwaleka".
Ngoku lawula + cofa kwimaski eyenziweyo kumaleko ukuze ukhethe kwakhona kwaye ukhethe imvelaphi.
Ngoku siya kuKhetho> Guqula kancinane> Yandisa> 1pixel.
Buyela kwakule ndawo inye, kodwa sikhethe ukuphela> 1pixel.
Ngoku sijonga ukhetho olwenziwe ngoonobumba abakhulu + be-backspace ukuzalisa.
Kwiwindow elandelayo sikhetha umxholo ngokutsho komxholo kwaye ucofe ulungile.
Sisusa ukubonakala kocingo kuloo maski, kwaye kuya kufuneka sibone eli nani lichazwe kakuhle xa sisusa ukhetho ngolawulo + D.
Ngoku kumaleko angasemva sikhetha Amacebo okucoca> Iimpembelelo zeBlur> I-blur yeFild
Sihambisa iziko phezulu kancinci.
Ngoku sihamba ngentloko ukuya kwi-Soft Bokeh ukuyihambisa ukuya kuma-65%.
Kuluhlu olukhanyayo sishiya izilayidi ezimbini ngo-195.
Kwaye kwi-Blur, malunga nee-pixels ezingama-32.
Sisebenzisa ukufiphala ku-Kulungile. Esi sisiphumo sokugqibela:
Iziphumo zebokeh kuya kuxhomekeka kwifoto esinayo, Ke ngumcimbi wovavanyo de ufumane isiphumo esifunekayo ngezi paramitha zintathu zokugqibela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Ungasongeza njani isiphumo se-bokeh kumfanekiso kwi-Photoshop
Iikiti ezili-10 ezigqwesileyo ze-UI zokuKhuphela simahla